Madaxweynaha Puntland oo Safar Ugu Ambabaxay Magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo Safar Ugu Ambabaxay Magaalada Muqdisho.
Diseenbar 2, 2017 11:55 b 0
Maxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 02 December 2017 safar shaqo ugu ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dawladda Federaalka ah Soomaaliya.
Madaxwaynaha iyo weftgiisa ayaa kahor intaanay ka anbabixin garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ee Kanooko ayaa waxaa kusii sagootiyay madaxwayne kuxigeenka dawladda Puntland Eng Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camay iyo madax katirsan golayaasha dawladda Puntland, saraakiiisha ciidamada iyo saraakiil katirsan madaxtooyada Dawladda Puntland.
Madaxwaynaha Dawladda Puntland ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kaga qaybgelidoonaa shirka amniga qaranka, kaas oo ka furmidoona magaalada Muqdisho, shirkaas oo ay kasoo qayb geli doonaan madaxda dawladda xubanaha ah Dawladda federaalka Soomaaliya.
Madaxwaynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed ali Gaas ayaa kahor inta aanu ka anbabixin garoonka diyaarahada magaalada Garoowe ee kanooko, ayaa waxaa uu lahadlay warbaahinta isaga oo kawarbixinaya safarkiisa maanta uu ugu anbabaxay Muqdisho waxaana uu yiri madaxweynuhu
”waxaan kusocdaa Muqdisho oo aan kaga qaybgalayo shir ay isugu imanayaan beesha caalamka iyo madaxda soomaalida, iyo sidoo kale shirkii amniga qaranka oo arimaha ugu muhiimsan oo looga hadlayo ay noqon doonto nabdgelyada dalka, xasilinta iyo geedi socodka dawladnimadda soomaaliya, shirkaas oo labada maalmood ah, kabacdinawaxaa dhici doona shirkii beesha caalamka iyo madaxda soomaalida oo dhammaandoona bisha 5teeda ah, kabacdina inshaa allaahu waxaan rajaynayaa in aan si nabad gelya ah usoo laabano, waxaan idinkula dardaarmayaa in laga shaqeeyo lana taageero nabadgelyada iyo horumar, guul baan diin rajaynayaa”
Ugu danbayn, Madaxwaynaha Dawladda Puntland DR. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo weftiha balaadhan ee uu hogaaminayo ayaa maalmaaha fooda inaku soo haya ku sugnaan doona magaalada Muqdisho, kadibna dalka dib ugu soo laaban doona.
Qaliin indha Fiiqis ah oo lagu sameyaay ku dhawaad Boqol Qof Magaaladda Gaalkcyo (dhegayso)
Madaxweyne ku Xigeenka Puntland oo Garowe kaga qayb galay Kulan lagu shaacinayay Gollaha ladagaalanka Qabyaalada (dhegayso)
on Koox hubaysnayn oo rasaas ku furtay ciidamo ku sugnaa kontaroolka koonfureed ee Gaalkacyoaragti qofeed somaliya hogaan bay u baahantay dhab u fekera, marka sida ay tahay aan...
on “Hadaan Ahey Xasan Shekhii Xaley/Shaley” Aawey Xalaafkii Aan Sitey? (Qormo)Qormadaan Hassan Sheikh nabar xaqdaro allah ha'uga dhigo! Akhrinta qormadaan waan ka dhergi waayey waadna...
on Maqaal: Dowladnimada Soomaaliya oo Hana Qaadey, By Asadnaa Suudi.Asc Qoraalkani wuxuu mudan yahay loo Mahad Celiyo Qoraaga oo isku hawlay tusmaynta dawlad iyo...
on “Hadaan Ahey Xasan Shekhii Xaley/Shaley” Aawey Xalaafkii Aan Sitey? (Qormo)Kkkkkkk, inaba caadi maaha maqaalkaan. Hade noqonlaheyd sarbeebta nuxurka hadalka ku jirta iyo dhinaca qosalka....